Digital Kaameerada Data Recovery - Ladnaansho videos / sawiro ka camera
> Resource > Camera > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Digital Kaameerada
Kabashada Data on camera ah digital?
Waxaan u lahaa sawir laga qaaday aniga iyo saaxiib la ah, iyo wareejiso computer ka hor inta aan la tirtiro kamaradaha bakhtiiyaan aan ku sameeyey, laakiin waxa uu ka soo baxay ayaa kombiyuutarka sidaas darteed ma jiro qaadan jidkaas. Ma jirtaa meel kasta ayaan ka heli karaan sawirka in dib? Daacadnimadii, hadda ayaan dan ah kama qiimaha, kaliya waxaan doonayaa inaan sawir in dib. Waxaa loola jeedaa wax badan ii. : /
Camera waxa uu ahaa DV3100 Aiptek ah, iyo kamarad marnaba isticmaalka badan waxaa ka mid ah anyways, laakiin anigu garan maayo haddii ay ahayd filan si ay u anyways hor iman. I caawi. :(
Waxaad hadda ilka karaa :) kabashada xogta camera Digiral kaa caawin karaan in ay dib u helaan aad sawiro lumay, videos iyo files audio, arrinta ma waxaad iyaga waayay tirtirka, qaabka, ama sababo kale sida musuqmaasuqa qalab iyo Reebnaan. Sawirka Waxaad weligeed wareejiyo your computer ka camera digital, si aad isku dayi kartaa in ay sidoo kale ka soo kabsado your computer ama camera. Labada isku mid yihiin, inta ay yihiin oo aan overwritten by sawiro cusub ama faylasha.
Iyadoo lagu tilmaamayo overwriting ah, waa mid aad u muhiim ah: Ha isticmaalin camera aad u sawiro cusub, gaar ahaan kaarka kaydinta geliyo kamarad qaataan. Oo ha badbaadiyo macluumaadka cusub si ay u Risaalo meesha aad sawiro aad badiyay kombiyuutarka. Files New isticmaalin doonaa meel bannaan oo ah in aad sawiro lumay degan si ay u overwrite. In eray kale, guusha soo kabashada camera sawir digital ku xiran tahay ilaalinta kaarkaaga ama disk, in badan oo ah kordhiyo.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka kamaradaha digital?
Si aad dib ugu photos lumay ka camera aad u hesho, waxaad u baahan tahay si aad u hesho a software camera reovery xogta hore. Wondershare Photo Recovery noqon kartaa doorasho wanaagsan (ama Wondershare Photo Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS X), taas oo ay taageertaa dib u soo kabashada ee photos qaabab kala duwan, iyo sidoo kale music video iyo qaab badan. Tan ugu muhiimsan, waa amaan ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
Waxaad isku dayi kartaa version maxkamad free hoose si aad baarista photos lumay ka hor inta aanad bixin. Soo qaado isku day ah! Waxaad ku dhameysan kartaa shaqo la tallaabooyin dhowr ah ilmaha.
Muhiim: Ha dejisan iyo rakibi this software camera soo kabashada xogta on disk ama xijaab meesha aad sawiro aad laga badiyay.
3 tallaabo si loo dhamaystiro dib u soo kabashada camera digital photo
Aynu qaadan Recovey Photo ee Windows sida isku day ah oo sameyn ku soo kabashada xogta camera talaabo talaabo ah.
Step1. Haddii aad rabto in aad soo kabsadaan ka photos lumay ka camera aad, aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan camera ama kaarka kaydinta waxaa ka mid ah in ay kombiyuutarka. Haddii doonayaan inay ka soo kabsadaan ka maqan sawiro ka your computer, guji kaliya ee "Start" in ay ka hor tagaan.
Step2. Dooro qalabka haddii aad camera aad xirmaan oo guji "Scan" si aad u ogaato photos lumay ka. Haddii qalab aan, fadlan dooro Risaalo meesha aad badiyay sawirkaaga kombiyuutarka, oo waxaad u tagtaan "Scan".
Step3. Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable waxaa la helay, oo ay ku jiraan faylal cod ah, sawiro iyo videos. Si aad u heshid sawiro lumay, aad si toos ah u tegi kartaa "Photo" category, iyaga ku eegaan mid mid markaasna aad u hubiso in ay "Ladnaansho" iyaga.
Maxay waa in aad fiiro waa: Ha mar kale lagu badbaadiyo sawirrada kabsaday on disk asalka ama qalab, sababtoo ah files cusub overwrite doona faylasha lumay. Haddii ay jirto wax files maqan, weli waxaad haysataa fursad labaad si scan iyo kabsado iyaga.